Fodder biiti na iche - Beet iche - 2020
Ụdị nke fodder biiti
N'etiti ihe nile di iche iche di iche iche, fodder na-ewe ebe ruru eru. Ọ bụ nri dị oké mkpa n'oge oyi maka anu ulo. A na-enwe obi ụtọ site na ehi, ehi, rabbit, ịnyịnya. Osisi ahụ bara ụba na eriri, pectin, eriri nri, carbohydrates, saline ịnweta na protein.
Beets na-amụba ụba mmiri ara ehi n'oge oge nri ụmụ anụmanụ na ndepụta ọkụ.. Ke adianade do, ọ na-ezo aka osisi ndị na-enweghị atụ na nnukwu mkpụrụ. Ọ bụghị nanị na a na-eji ihe ọkụkụ eme ihe, kamakwa n'elu osisi.
Ịhọrọ ịgha mkpụrụ nke kụrụ maka ịgha mkpụrụ, ọ dị mkpa ịmara na ihe kachasị arụpụta bụ ụdị cylindrical, ekara na elongated-cone. Ụdị dị iche iche nke ọcha, pink na odo bụ ndị a ma ama maka ọdịnaya shuga ha.
Tụlee ụdị nke fodder biiti.
Akwukwo ndi ozo bu "Tsentaur" bred site na Polish ndi nnocha ma bu nke otutu okpukpu-sugar. Nkpọrọgwụ kụrụ bụ nke na-acha ọcha, nke dị n'ogologo oval, na-atụle 1.2-2.7 kg.
Ihe dị iche na nke a dị iche iche bụ enweghị mpụta mpụta nke mgbọrọgwụ ihe ubi na ngwangwa ngwa ngwa nke mgbọrọgwụ na epupụta. Mkpụrụ isi nke ụdị dịgasị iche iche bụ obere, n'ihi ya, a na-emetọ mgbọrọgwụ.
Ihe dị mkpa nke dịgasị iche iche bụ iguzogide cerkosporioz na bolting. Osisi ahụ anaghị achọ ihe ndị dị n'ime ala ma bụrụ ndị na-eguzogide ala. Nkpọrọgwụ kụrụ tupu owuwe ihe ubi na-emikpu n'ime ala site na pasent 60, n'ihi ya, ha nwere ike wepu ha ma na aka. A na-echekwa ihe ubi n'ubi dị jụụ na okpomọkụ site na 0 ruo 4 Celsius C ruo mgbe May. Oge ahihia bụ ụbọchị 145, mkpụrụ ahụ bụ 100-110 t / ha.
Ị ma? Mkpụrụ nke ọtụtụ ụdị fodder biiti nwere ọnụ ọgụgụ dị iche iche. Nke a na-akọwa site na eziokwu ahụ na anyị anaghị agha mkpụrụ, ma seedlings, ya mere ọtụtụ osisi na-eto site na otu obi ụtọ. Na nke a, ndị Ome kwesịrị imebi. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-azụlite azụlitewo ihe dị iche iche na-eto eto na ụdị osisi, ndị mkpụrụ ya anaghị etolite.
Ndị dị iche iche nke Polish na-azụlite ụdị nsị dị iche iche. Ihe mgbakwasị ụkwụ nke agba odo-acha odo odo, ụdị mmiri, na-eru ihe ruru 6 n'arọ. Anụ ahụ dị ụtọ, na-acha ọcha. Nkpọrọgwụ kụrụ nwere ihe dị mma, na-emetọ ya ma mikpuo ya n'ala 40%, ya mere ọ ga-adị mfe idocha ha aka.
Osisi anaghị achọ na ihe dị n'ime ala, ọ bụ ụkọ na-eguzogide ma na-akọwa ngwa ngwa nke mgbọrọgwụ na epupụta. Osisi na-eguzogide ọrịa dị mma, ọ na-esiri tsvetushnosti ike. A na-echekwa akwụkwọ nri dị iche iche ruo n'ọnwa Disemba ma nwee ọtụtụ ihe akọrọ na sucrose. Oge ahihia bụ ụbọchị iri anọ na ise, mkpụrụ nke mgbọrọgwụ kụrụ bụ tọn 125 / ha.
Akwukwo ndi ozo bu "ederede" na-ezo aka iche iche nke Polish ma bu ebe osisi okpukpu ogu di iche iche. Na usoro nke maturation na-ezo aka ufọt ufọt mbubreyo omenala. Nkpọrọgwụ kụrụ nke ọdịdị na-enweghị atụ na-enweghị alaka, agba aja aja, na-eru ihe ruru kilogram isii.
Ala ya dị mma, 40% emikpu n'ime ala. Anụ ahụ dị ọcha, kemmiri. Iguzogide ọrịa na agba agba dị elu. A na-echekwa mkpụrụ osisi ahụ. Oge na-eto eto bụ ụbọchị 145, mkpụrụ ahụ dị 125 t / ha.
Ọkụ dị iche iche nke Institute of Agriculture nke Ukraine. Ọ bụ nke ọtụtụ na-eto eto n'etiti-ripening iche. Mkpụrụ osisi mgbọrọgwụ nke ụdị ihe a na-acha na cylinder na oval. Ihe dịgasị iche iche na-ejupụta obere ahịhịa na-adịghị emetụ n'ahụ, n'ihi ya, a na-emetọ mgbọrọgwụ ahụ. Mmikpu ya n'ime ala bụ pasent 50, nke na - enye gị ohere iwe ihe ubi n'ụzọ.
Ọ na-eme ka mmetọ fertilization dị na ala ma gosipụta mkpụrụ dị elu. Ụdị dịgasị iche iche bụ ọkọchị na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ọrịa na pests. A na-echekwa mkpụrụ osisi ahụ. Mkpụrụ ahụ bụ 120 t / ha.
Fodder beet "Brigadier" na-ezo aka iche nhọrọ German. Nkpọrọgwụ kụrụ nwere ọdịdị oval-cylindrical, oroma-acha akwụkwọ ndụ na-acha na-acha ọcha na-egbuke egbuke na ihe dị ka kilogram 3. Ihe dị elu shuga.
Otu ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche bụ ichekwa ahịhịa ndụ na-egbuke egbuke ruo mgbe owuwe ihe ubi. Osisi ahụ anaghị achọ ihe ndị dị n'ime ala ma bụrụ ndị na-eguzogide ala.
Mkpụrụ osisi na-eguzogide frosts n'oge dị mkpirikpi ruo -3 Celsius, na okenye osisi ruo -5 ° C. Beet "Brigadier" nwere ezigbo ngosi na-eguzogide ọgwụ na agba. A pụrụ ime ihe owuwe ihe ubi ma na ngwaọrụ ma na aka. Nkpọrọgwụ kụrụ nwere nnukwu pasent nke ihe akọrọ, ya mere ha echekwara maka ogologo oge. Oge ahihia bụ ụbọchị 120, mkpụrụ ahụ dị 150 t / ha.
Fodder biiti "Lada" bụ bred site Belarus breeders na bụ nke otu-ibu iche. Mgbọrọgwụ na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha-acha ọcha, oval-cylindrical shape with base point, weighing up to 25 kg. Anụ ahụ dị ọcha, na-atọ ụtọ, oke. Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ n'ime ala bụ 40-50%. Otu ihe dị iche iche dịgasị iche iche dị iche iche bụ iguzogide ụkọ na ọrịa. A na-emeso mkpụrụ nke osisi ahụ na mgbagwoju nke ihe na-akpali akpali. Nke a na - enye ndị seedlings aka ka ha ghara ịtụ egwu ihu igwe ọnọdụ, pests na ọrịa.
Ụdị dịgasị ala. Enwere nkwụsi ike nke osisi n'oge dum na-eto eto ma ọ bụ eriri eriri n'oge nchekwa. A na-echekwa mkpụrụ osisi ahụ. Uru nke "Brigadier" dị iche iche bụ ichebe mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-adọrọ mmasị n'oge nile na-eto eto ma na-azọpụta mkpụrụ, n'ihi na ọ dị 1 hectare nanị 4 kilogram nke mkpụrụ. Kwesịrị ekwesị maka ihicha ụlọ. Nkezi mkpụrụ nke 120 t / ha.
A na-eburu "Nadezhda" fodder maka ịkọ ihe na ọnọdụ nke North-Western, Middle Volga na Far Eastern nke Russia na-esite na otu-eto iche iche.
Akuku mgbọrọgwụ bụ oval-cylindrical, red. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke osisi ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ejighị obere akpụkpọ anụ anthocyanin. Anụ ahụ dị ọcha, kemmiri. Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ bụ 40%. Osisi na-eguzogide powdery mildew na chalcosporosis bụ nkezi. Ọdịdị dịgasị iche iche dị elu.
Ị ma? Akwukwo Anthocyanin nke akwukwo a sitere na anthocyanin pigmenti. Ọ nwere ìhè na-acha anụnụ anụnụ na gburugburu ebe alkaline na-acha uhie uhie na acid. Akwukwo Anthocyan, ma o jiri ya tụnyere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-enwetakwu ume nke anyanwụ. Esemokwu dị iche iche na-acha uhie uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ihu igwe na-egbuke egbuke bụ 3.5 degrees, na ntụgharị - 0.5-0.6 ogo.
Ụdị dị iche iche fodder beet "Milan" na-ezo aka na-eto eto otu-ụdị shuga, nke Belarus na-azụlite. Otu ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche bụ ọganihu ngwa ngwa n'oge mbụ.
Akuku ihe mgbokoriri bu oval, nke obula n'ogo, nke di ocha na ala di ocha na elu. Akwụkwọ ndị ahụ dị nha, acha akwụkwọ ndụ na agba na-acha ọcha veins, ọdịdị gbara gburugburu.
Ezubere maka ịkụ ihe n'ubi niile. Imikpu na ala nke mgbọrọgwụ bụ 60-65% na mmerụ dị ala. E nwere ike ime ihe owuwe ihe ubi na aka. Osisi na-eguzogide ọgwụ na tsvetushnosti na chalcosporosis. Owuwe ihe ubi kwesiri nchekwa nchekwa oge. Mkpụrụ ahụ bụ 90 t / ha.
Fodder biiti "Vermon" na-ezo aka n'otu-seeded ngwakọ iche toro na Central ógbè Russia. Ihe mgbọrọgwụ osisi ahụ bụ mkpụrụ osisi cylindrical-conical, nke ọkara nha, nke dị ọcha na akụkụ ala na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na elu. Onu ogugu bu ihe ruru 90 t / ha.
Ọ dị mkpa! Nri beets na-arụ ọrụ nke ọma ka ha na-eto eto na mpaghara ebe ọka barley, alfalfa na mkpo.
Ụdị fodder dịgasị iche iche "Jamon" na-ezo aka na ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ mkpụrụ akụkụ ndị toro eto na ọnọdụ nke mpaghara Central Economic World nke Russia. Ihe mgbọrọgwụ na-eme ka mkpụrụ osisi ahụ dị, nke na-acha odo odo, nke na-acha odo odo na akụkụ ala na oroma na elu. Epeepe akwụkwọ nke osisi nke ọkara, agba agba ndụ na obere petioles. Iguzogide mmeri nke cercosporosis bụ nke kachasị, ihe ọkụkụ na-adịghị emetụta ya. Onu ogugu bu iri ato ato na iri ato.
Fodder beet "Starmon" na-ezo aka otu mkpụrụ seeded ngwakọ ọtụtụ toro na ọnọdụ nke Central Black Earth mpaghara akụ na Russia. Mgbọrọgwụ bụ conical, odo na ala na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'elu. Na rosette nke epupụta bụ ihe ziri ezi, akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke acha akwụkwọ ndụ na agba ọcha na ogologo petioles. Nwee ihe ruru 70 t / ha.
Ọ bụ ezie na bekee fodder bụ osisi ndị na-enweghị atụ, ma iji nweta mkpụrụ dị elu, ọ dị mkpa ịhọrọ ebe kwesịrị ekwesị maka ịkụ ihe. Beetroot na-etolite n'osisi ala, ájá, ala na-eme nri. Nkpọrọgwụ na saline, acidic, nke nwere ike ịnweta ala mmiri na-eme ka ọ ghara ịga nke ọma.
Ọ dị mkpa! Na mgbakwunye na ụdị ala, mkpụrụ nke osisi fodder biiti na-emetụta ụbọchị nke ịgha mkpụrụ nke osisi, ọnọdụ ihu igwe, ịdị omimi nke ịgha mkpụrụ, na mmiri zuru ezu na ikuku oxygen na Ome.
Tupu ịgha mkpụrụ beets, ọ dị mkpa iji chọpụta ihe kachasị mkpa nke ihe ubi n'ọdịnihu, jikọta ha na àgwà nke ụdị ọ bụla dị iche iche ma kpebie ụdị nke dị iche iche nke kụrụ nke kacha mma a kụrụ n'ubi ha.